Ka ihu ya, WordPress Search dị nwayọ na ezughi oke. Obi dị m ụtọ, Google na-agba ọsọ ọsọ ma na-ezi ezi. Na mgbakwunye, Google si Nchịkọta Omenala Google emeela ka ọ banye n'ime blọọgụ gị (ma ọ bụ weebụsaịtị).
Agaghị m egbu oge ime nke a na blọọgụ ọ bụla - ọ bụghị naanị maka mmụba ọkụ na ọsọ kamakwa maka nsonaazụ ndị dị mkpa. I nwedịrị ike ịme ego ole na ole n'akụkụ! Lelee onwe gi anya ma nye mpempe akwụkwọ ọchụchọ m maka ntụgharị! Won't gaghị enwe mmechuihu!
Tags: google csegoogle cse wordpressgoogle +isiokwuiri abụọ na otuiri abụọ na otucse wordpresswordpress google cse
Enweela m ọchụchọ omenala Google na blọọgụ m ogologo oge ugbu a. Agbanyeghị, ana m edobe nhọrọ abụọ ahụ oghe.